सुरक्षा र दयाहाङ्गको गज्जबको नृत्य | Tv Sansar
चलचित्र ‘भैरे’ को दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ। यसअघि सार्वजनिक भएको ‘सान्नानीलाई भेट्न आउँदा’ बोलको गीतले चर्चा बटुल्दै गर्दा दयाहाङ राई र सुरक्षा पन्त अभिनित ‘सनम माया लाको’ गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेको हो। फिल्मको प्रदर्शन मिति २०७५ जेठ १८ गते तय गरिएको छ।
एभरेष्ट सूर्य बोहराको शब्द रहेको गीतमा यम बरालले संगीत भरेका छन्। प्रेमभाव बोल्ने गीतमा यम र अञ्जु पन्तको स्वर गीतमा सुन्न सकिन्छ। डियोमा दया र सुरक्षाको केमेष्ट्री कमालको देखिएको छ। कोरियोग्राफर बसन्त श्रेष्ठले भेषभुषामा विशेष ध्यान दिएका छन्।
एभरेष्ट सूर्य बोहराको लेखन र निर्देशन रहेको फिल्मको निर्मातामा प्रेम प्रसाद पौडेल र देवीमाया अधिकारी छन्। पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेको यो फिल्ममा करुणाकर घिमिरे, सविता गुरुङ, यम बराल र कुमार बस्नेत फिल्मका सह-निर्मातामा छन्। नेपालय सिनेमा ईन्टरनेशनलद्वारा निर्मित तथा लेख बहादुर पुन कार्यकारी निर्माता रहेको ‘भैरे’ को सम्पादनको जिम्मेवारी बनिष शाहले सम्हालेका छन्।
सूर्य थोकरको द्वन्द्व रहेको यस चलचित्रमा विक्रान्त बस्नेत, बुद्धि तामाङ, वर्षा सिवाकोटी, सुनिल थापा, अनुभव रेग्मी, कञ्चन ठकुरी, अंकित पौडेल, सयाहाङ राई, जान्वी बोहरा, जयनन्द लामा, सुरविर पण्डित, अर्जुन गुरुङ लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ।
टाइगर श्राफले नयाँ वर्षको शुभकामना दिदै ‘बागी २’ हेर्न आग्रह
केकीको प्रेम को सँग? राजाराम, विजय, अंकित कि अनुप सँग ?
माया लाउँदै सारा र निराजन
Kangana Ranaut’s Sizzling Pictures on Cosmopolitan Magazine
निराजन प्रधान सँग भागीन् ठमेल बजारकी अलिशा राई